Raw 17-Methyltestosterone powder (58-18-4) hplc ma98% | AASraw
17-Methyltestosterone ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Testosterone ntụ ntụ / 17-Methyltestosterone ntụ ntụ
SKU: 58-18-4. Categories: Testosterone ntụ ntụ, Anabolics Steroids
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke 17-Methyltestosterone ntụ (58-18-4), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkọta mma.
17-Methytestosterone bụ ihe sịntetị, ọgwụ activeanabolic-androgenic steroid (AAS) nke a na-eji mee ihe maka orrogen deficiency na ụmụ nwoke na maka ọtụtụ ihe ngosi ndị ọzọ.
Raw 17-Methyltestosterone ntụ ntụ isi agwa
Molekụla Formula: C20H30O2
Melt Point: 162-168 ° C
Raw 17-Methyltestosterone ntụ ntụ eji mee ihe na steroid steroid
17-Methytestosterone (CAS 58-18-4) na-akpọ 17-MethyTesto, Methy testo, aha ndị dị ka Agovirin, Android, Metandren, Oreton, Testred, Virilon, ndị ọzọ.
Raw 17-Methyltestosterone ntụ ntụ Usage
Ihe nkedo nke methyltestosterone bụ 10 na 50 mg / ụbọchị na ụmụ nwoke maka ọgwụ ahụike na ahụike - na ebumnuche mmemme na 2.5 mg / day na ụmụ nwanyị maka mgbaàmà nke menopausal.Ndị ejiji dị ka 200 mg / ụbọchị na-emeso ụmụ nwanyị nwere ọrịa cancer na-enweghị ike ime nke na-emezighị emezi ọgwụgwọ ndị ọzọ.
Ịdọ aka ná ntị na nsị 17-Methyltestosterone ntụ ntụ
Mmetụta ndị metụtara gụnyere amnesia, nchekasị, ịchọpụta ntutu isi, dizziness, akpụkpọ anụ, hirsutism, mmegide, enweghi urination, nkwonkwo, ọrịa nhụjuanya, edema ederede, sweating, na vasodilation.
Raw 17-Methyltestosterone ntụ ntụ Ntuziaka ọzọ
A na-eji ndị na-eme ihe na-eme ka aromita ghara iwepụta ma ọ bụ gbochie mmetụta estrogenic nke methyltestosterone na ndị na-emepụta 5a-reductase nwere ike iji gbochie ya ike na ihe ndị a na-akpọ "androgenic" ma mee ka usoro anabolic dịkwuo na androgenic ma belata ọnụego nke androgenic mmetụta ndị na - emetụta ya .Ọdịdị dịka bicalutamide na cyproterone acetate nwere ike igbochi maapụ anabolic na androgenic nke AAS dị ka methyltestosterone.
17-Methyltestosterone ntụ ntụ (CAS 58-18-4)
Esi zụta 17-Methyltestosterone ntụ ntụ (CAS 58-18-4) site na aasraw
AASraw na-enye 99% 17-Methytestosterone raw ntụ ntụ na bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka njigide ojiji.
17-Methyltestosterone Ezu ntụ ntụ Ezi ntụziaka:
Ebee ka ịchọta 17-Methyltestosterone kwadoro dị ka sistemụ n'ịntanetị?
1 nyochaa maka 17-Methyltestosterone ntụ ntụ
17-Methyltestosterone ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi
Testosterone Acetate ntụ ntụ